हेर्नुहोस् यसरी गर्न सकिन्छ घिउकुमारीद्वारा एलर्जीको उपचार
अक्टोबर 5, 2018 नोभेम्बर 23, 2018 साइन्स इन्फोटेक	3 Comments एलोभेरा
एलोभेरा (घिउकुमारी) नचिन्ने शायद कोही नहुन सक्छ । आज मैले घिउकुमारीद्वारा एलर्जीको उपचार कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रकाश पार्दै छु फाइदा उठाउन नभुल्नु होला । हामीले सानो गमलामा रोपेर पनि लाभ लिन सक्नेछौं ।
एलर्जी पूरै शरीरमा फैलिए घातक हुनसक्ने भएकाले तत्काल उपचार जरुरी छ । कतिपय एलर्जीको उपचार चिकित्सकबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ भने कहिलेकाहीँ घरेलु सामग्रीको प्रयोगबाट पनि एलर्जीमुक्त हुन सकिन्छ । शरीरमा नकारात्मक असर नगर्ने त्यस्ता घरेलु ओखतीको प्रयोग गरी छालाको समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ ।
घिउकुमारी छालासम्बन्धी समस्याका लागि रामवाण मानिन्छ । घिउकुमारीमा पाइने एन्टी फंगल तत्वले एलर्जीलाई पूर्ण रूपले नष्ट गर्छ । यसको लागि ताजा एलोभेरा जेललाई एलर्जीको वरिपरि लगाउनुपर्छ । त्यसलाई २० मिनेट जति त्यत्तिकै रहन दिएर सफा पानीले धुनुपर्छ । यसो गर्दा छालासम्बन्धी एलर्जी मात्र नभई अन्य रोगबाट समेत मुक्त हुन सकिन्छ ।
← वैज्ञानिक कसलाई भनिन्छ ?
नेपालमा डीएनएको इतिहास कस्तो रहेको छ ? →
3 thoughts on “घिउकुमारीद्वारा एलर्जीको उपचार”
Pingback:घ्युकुमारीको जुसका फाईदाहरु